Tetikady vao haingana ho an'ny Fandrosoana | Reef Resilience
Tahaka ny misy fanamby iraisan'ny rafi-pihariana manohintohina ny fisian'ny jono maharitra, dia misy ihany koa ireo hevitra sy fanavaozana iombonana izay mety hanampy amin'ny fanambarana ireo fanamby ireo. Ity lisitr'ireo tetikady misongadina dia tsy feno, fa kosa natao hanentanana ny eritreritra, ny fifanakalozan-kevitra, ary ny fifandraisana eo amin'ireo mpitsabo eny an-tsaha. Fanasana ho an'ny vondrom-piarahamonina amin'ny fitantanana ny harena an-kahalalahana mba hanatsarana sy hampiana ireo hevitra ireo rehefa manomboka ny pilote vaovao, ny lesona azo ianarana, ary ny famolavolana vaovao nohavaozina sy nosedraina.
Fantaro hoe iza no mihazona ny fahefana
Tahaka ny tranga amin'ny vondron'olona rehetra, ao amin'ny rojom-panatobiana manokana dia misy mpilalao manokana mitazona ny fiantraikany amin'ny hafa. Ny fijerena hoe iza ireo olona ireo, ary ahoana no ahafahan'izy ireo mandray soa avy amin'ny hetsika fiarovana amin'ny alàlan'ny fiarovana, dia mety ho fomba mahery vaika hanombohan'ny fiovan'ny toekarena tompon'andraikitra. Ohatra, amin'ny fanjonoana sasany, ny mpamatsy dia mihoatra lavitra noho ny mpivarotra hazandrano fotsiny-izy ireo no manome vola ho an'ny sambo, solika, ary ranomandry; Manohana ny mpanjono izy ireo amin'ny fandoavana ny saram-pitsaboana sy ny fandaniana hafa tsy ampoizina rehefa mitsangana izy ireo. Ny fametrahana fidiram-bola avy amin'ireo mpamatsy manodidina ny hetsika fanangonam-piantohana maharitra dia nanampy ny mpitaona ny mpandray anjara handray anjara, ary nanangana fanohanana ho an'ny fisian'ny hetsika fisorohana vonjimaika maharitra manerana izao tontolo izao.
Fantaro ny hevitra
Ny mpilalao indraindray dia misalasala rehefa manangona sy mizara ireo angona. Ny fomba iray ahazoana fahatokisana dia ny manomboka kely, ary manaporofo ny lanjan'ny fandraisana anjara amin'ny fifantohana amin'ny mpilalao iray izay afaka modely ho an'ny hafa. Peter Mous niaraka tamin'ny TNC Indonesia dia nanao izany rehefa niara-niasa tamina orinasa iray tao Bali izy. Miara-miasa akaiky amin'ny mpitarika fandraharahana any an-tsainy, ny ekipany dia nametraka teknôlôjia sy paikady vaovao ao amin'ny efitrano famolavolana, izay nitombo ny fahombiazany sy ny fahombiazany ary nanampy ny orinasa hanatsara ny marika. Mandritra izany fotoana izany, amin'ny alalan'ny fandrindrana amim-pitandremana, dia nanangana rafitra fizarana angon-drakitra izay manome TNC miaraka amin'ny fampahalalam-baovao tranainy mifototra amin'ny zavatra mivezivezy amin'ny toeram-pambolena - dingana goavana iray amin'ny fananganana fitantanana sahaza ho an'io fanjono tena sarobidy io.
Mpiasa amin'ny fikarakarana ny varotra, ny lanjany, ary ny fandrefesana ny rano sy ny voly, Indonezia. Sary © Jeremy Rude / TNC
Mifandrindra amin'ny soatoavina ara-kolontsaina efa misy
Ny filazana fa samy hafa ny endriky ny fitaovam-pitaovana, nefa tena ilaina ny manaiky mazava tsara ny fahasamihafana mety misy eo amin'ny fiarahan'ny mpanjono any amin'ny faritra iray sy ny iray hafa manakaiky ny morontsiraka. Raha ampitahaina amin'ny fisarihana shiliana sy Peroviana, ny fahasamihafana lehibe amin'ny fomba fijerin'ny mpanjono sy ny asany dia mahatonga ny sasany amin'ireo tetikady izay niasa tany Chile, tsy mahasoa ho an'i Però. Ankoatra izany, Matias Caillaux ao amin'ny TNC, izay miara-miasa akaiky amin'ireo mpanjono ao amin'ny faritra Ancón, dia nanambara ny avonavona tao an-toerana ho toy ny lanjany manan-danja izay mety hanambatra ny mpanjono manodidina ny fampielezan-kevitra.
Manome porofon'ny fandrosoana
Ny mpanarato dia maniry ny hahita ny vokatry ny ezaka fiarovana ary matetika dia tsy afaka ny hiandry ireo valiny momba ny tontolo iainana maharitra maharitra. Ny fanohanana ny fivoarana sy ny porofo fa ny ezaka dia raha ny marina dia singa manan-danja ho an'ny fahombiazan'ny mpandray anjara sy ny fahombiazan'ny fahombiazan'ny fahombiazana. Ny fifantohana amin'ny fiovan'ny singa mifandray amin'ny fifadian-kanina eo amin'ny tontolo iainana dia fomba iray hanaovana izany. Ny Blue Ventures, tsy maka tombombarotra, dia nampiasa ity fomba ity hamporisihana ny fiarahamonina mpanjono avy any Madagasikara handao ny faritra kely tsy misy atody ho an'ny horita. Mivoatra haingana sy haingana dia haingana ny orita dia nitaky dimy volana fotsiny mba hampisehoana ireo fiverenana lehibe. Raha nahita ny tombontsoa azo avy amin'ny porofo, dia nanaraka haingana ireo vondrom-piarahamonina hafa.
Ampidiro fomba fivelomana mahazatra hafa
Amin'ny fomba hafa dia nampiasa ny fambolena sy ny fizahan-tany momba ny haran-dranomasina i Wayan Patut ho fomba iray hampitomboana ny toekarena sy ny fidiram-bolan'ny mpanjono ary hampihenana ny fomba fanjonoana manimba. Ny ampahany kely amin'ny vatohara dia azo amidy amin'ny varotra varotra aquarium aorian'ny fotoana fohy, manampy amin'ny famokarana fidiram-bola ho an'ny fiaraha-miasa ary koa hanome fanombohana hamerenana ny vatohara eo an-toerana. Ny fizahan-tany ara-tontolo iainana dia mitarika mpitaingina sy snorkelers hijerena ny toeram-piompiana sy ny haran-dranomasina, ary ny fidiram-bola bebe kokoa. Ireo renirano fidiram-bola sy famatsiam-bola tsy tapaka ho an'ny mpivarotra akquarium dia nahafahan'ireo mpanamboatra fiainana tsara kokoa, izay manafaka azy ireo amin'ny fanerena hanangona trondro akquarium amin'ny teknika manimba, ary mifantoka amin'ny fanjonoana maharitra.
Torohevitra fampitandremana eto anefa: ny paikady hampivelarana ny fivelomana hafa dia tsy maintsy dinihina tsara ary natao ho fiaraha-miasa akaiky amin'ireo vondrom-piarahamonina mba hialana amin'ny fiovana tsy ampoizina na ezaka mety hitera-doza kokoa. Ohatra, mba hampihenana ny ezaka fanjonoana, ny governemanta Kiribati amin'ny nosy Pasifika dia nanohana ny indostrian'ny menaka voanio mba hitaomana ireo mpanjono hiala ny rano. Nahomby ilay drafitra, ary niverina indray. Ny mpanjono teo aloha dia nahazo vola kokoa naka voanio, ary noho izany dia tsy nila niasa firy izy ireo. Nandeha nanjono izy ireo tamin'ny fotoam-pialan-tsasiny vaovao. Ny fanjonoana dia nitombo 33% raha ny vahoaka trondro vatohara nianjera. Manakaiky ny zava-baovao amin'ny alàlan'ny fomba famolavolana olona na solomaso antropolojika, dia manampy amin'ny famantatra ny antony manosika sy soatoavina ny olona hatramin'ny voalohany. Ireo dia azo araraotina mba hananganana fandraisana andraikitra maharitra sy maharitra miaraka amin'ny valiny mifanaraka amin'ny asa fivelomana sy ny fahasalaman'ny tontolo iainana.
Betsaka ny karazana rafitra fiaraha-miasa izay afaka manampy ny mpanjono sy ny mpamatsy rojom-bary handamina mba hamoronana vokatra tsara ho an'ny orinasany sy ny loharano. Any Silia sy Mexico, ireo kaoperativa dia niasa mba handamina ny mpanjono ary hanome fidirana manokana amin'ireo faritra fanjonoana manokana (TURF) izay azon'izy ireo tantanana avy eo mba hahitana fiverenana sy fiezahana maharitra. Any Kenya, ny maodely BMU dia mitondra mpilalao avy any amin'ny rojom-panolanana mba ho isan'ny vondrona fitantanana loharano. Tany Bahamas, ny Fikambanan'ny mpanondrana Bahamas an-dranomasina dia nahatsapa fa amin'ny maha-mpahazo tombontsoa lehibe amin'ny fanatsarana ny lobster, dia mila mampiasa vola hanohanana ny ezaky ny tetikasa fanatsarana ny jono (FIP) izy ireo. Amin'ny alàlan'ny fiarahan'izy ireo dia nanampy tamin'ny famoronana ny rafitra fitantanana angon-drakitra ampiasain'ny governemanta sy ny indostria ankehitriny izy ireo hanaraha-maso ny fisamborana sy fanondranana amboadia, ary koa ny fanohanana tetikasa maro hafa ao anatin'ny FIP, ao anatin'izany ny fanentanana momba ny fanabeazana sy ny fanentanana.
Hamono ny vokatra eo an-toerana
Misy ny firoboroboan'ny fitomboana, amin'ny alàlan'ny fanjonoana lehibe ara-barotra any Alaska mankany amin'ireo biriky kely any Però, mba hampiasana ny herin'ny laza tsara mba hamoronana marika maromaro. Ho an'ny mpanjono marobe, ny mari-pahaizana ara-tontolo iainana dia mandany vola; Na izany aza, ny tsenam-paritra dia mety ho vonona ny handoavana vokatra avy amin'ny faritra izay heverina ho "madio", "voajanahary", "tsara tantana", na fonja manan-tantara. Ny fitadiavana tombontsoa amin'ny lazan'ny faritra iray dia mety ho fomba iray hanokafana fantsom-pivarotana hafa ho an'ny mpanjono. Ny teknolojia vaovao sy ny orinasa tetikasa miompana amin'ny fisainana dia nanokatra ny varavarana mba hanamafisana ny dingana izay ahafahan'ny tantaran'ny faritra sy trondro ahafahana mamokatra izany. Betsaka ny orinasam-pitadiavana vitsivitsy, toy ny TheFish, dia miara-miasa amin'ny mpanarato sy mamatsy ireo rojom-bavaka handalinana ny vokatra ara-dalàna sy maharitra ary hanomezana ny mpanjifa hahazoana izany tantara izany amin'ny alàlan'ny QR codes amin'ny fonosana. Ny teknôlôjia, ny fikambanana, ary ny famoronana dia manao ny fampiroboroboana eo an-toerana ary azo vidiana amin'ny sehatra fikarakarana seafood manerana ny tany.
Fangonan'ny mpanjono amin'ny andro hivarotana dockside, Peroa. Sary © Jeremy Rude / TNC
Avelao ny mpanjono sy ny indostria hitarika
Ny fifamatorana mahomby amin'ny sehatra famatsian-tsakafo dia tokony hanamora ny fihainoana sy fanamorana ny didy sy ny fanaraha-maso. Ny fahatakarana lalina ny rafitra, ny asa, ny kolontsaina ary ny filan'ny mpandray anjara dia ny dingana voalohany amin'ny famolavolàna karazana fitsaboana sy vahaolana mety hitranga - ny rehetra dia tsy maintsy mandinika sy miara-miasa amin'ny mpilalao. Ny mpitantana ny loharanon-tsolika dia tsy maintsy mamely ny fandanjalanjana marefo amin'ny maha-mpanolotsaina azy-manome safidy sy porofo izay azo ampiasaina hanombanana na hanatsarana ny tetikasa-ary koa manampy ireo mpandray anjara handray ny heviny. Ny fananganana ity karazam-panampiana fanohanana ity dia hanana fomba lavitr'ezaka hanamafisana ireo mpilalao sarobidy handray andraikitra amin'ny fiovan'ny fitondran-tenany, ary ny fampiroboroboana ny fandaharan'asa ho an'ireo tanora mitovy aminy amin'ny fananganana maharitra.
Ny fampahalalana ato amin'ity fizarana ity dia natolotry ny Future of Fish. Raha mila fanazavana fanampiny dia mifandraisa misokatra amin'ny varavarankely vaovaoHo avy ny trondro.
misokatra amin'ny varavarankely vaovaoMampiavaka ny sehatry ny fakomanokatra fisie PDF